केटोजेनिक डाईट, केटो डाइटको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा बेजिया
पाउ Heidemeyer | 26/04/2021 16:00 | निर्वाह भत्ता, स्वास्थ्य
केटोजेनिक आहार कार्बोहाइड्रेट खपत प्रतिबन्धमा आधारित छ १०% शरीरलाई केटोसिसको स्थितिमा ल्याउन। यस तरीकाले शरीरको क्यालोरीहरू जलाउने अन्य तरिकाहरू सक्रिय पारिएका छन्।
यो आहार केटो डाईटको रूपमा पनि लोकप्रिय छ, जुन अंग्रेजीमा केटोजेनिक शब्दबाट आएको होयो कम कार्बोहाइड्रेट आहार हो र धेरै लोकप्रिय भएको छ किनकि यसले शरीरलाई शरीरमा जम्मा गरिएको बोसो जलाउन मद्दत गर्दछ, र अधिक क्यालोरीहरू बर्न गर्दछ।
धेरै व्यक्तिहरूले यी परिवर्तनहरू विश्वभर अनुभव गरेका छन्, यसले स्वस्थ तौल घटाउन मद्दत गर्दछ, हाम्रो स्वास्थ्य सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउँछ, र एथलेटिक प्रदर्शन सुधार गर्दछ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यी सुविधाहरू अनुभव गरेका छन् र यदि तपाईं यो डाइट लिन हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि राम्रो हुनुहुनेछ।
यदि डाइटहरू सुरक्षित तरिकाले गरिएको छैन भने, तिनीहरू असुरक्षित हुन सक्छन् र हामीलाई हानि पु cause्याउन सक्छ। यहाँ हामी तपाईलाई बताउँदछौं कि खालको किसिमको आहार कस्तो हुन्छ, अनुमति दिइएका खानाहरू के हुन् र उनीहरूको जोखिम के हो।
1 Ketogenic आहार विशेषताहरु
1.1 यो केटो खाना के हो?
2 केटोोजेनिक डाईटमा खानाहरू अनुमति दिइन्छ
2.1 केटोजेनिक डाईटमा अनुमति दिइएका खाद्यहरूको सूची
2.1.1 जनावर मूल को खाना
2.3 फ्याटयुक्त खाना
3 केटोजेनिक आहारको साथ सम्भावित समस्याहरू
Ketogenic आहार विशेषताहरु
केटोजेनिक डाइट एक हो जसमा कार्बोहाइड्रेट पूर्ण वा धेरै कम हुन्छन् शरीरलाई केटोसिसमा मजबुत पार्न। यो वजन कम गर्न छिटो, मद्दत गर्दछ केटोसिसमा शरीरले उर्जाको लागि बोसो प्रयोग गर्दछ।
केटोसिस एक चयापचय राज्य हो जुनमा कार्बोहाइड्रेट्स उर्जाको लागि ग्लूकोजको प्राथमिक स्रोतको रूपमा वंचित छन्। तसर्थ, शरीर बोसो को चयापचय बाट ऊर्जा प्राप्त गर्न बाध्य छ।
जब हामी कार्बोहाइड्रेटको शरीरलाई वञ्चित गर्छौं, कलेजोमा भण्डारित ग्लुकोज पहिलो स्रोतको रूपमा प्रयोग हुन्छ। एकचोटि यो उपभोग भयो, शरीरले फेटिक एसिडको उपभोग गर्न थाल्छ, तिनीहरूलाई केटोन शरीरमा रूपान्तरण गर्दै। यसको विशाल रिलीज केही अ for्गहरूको लागि खतरनाक हुन सक्छ, त्यसैले यो मध्यमसँग गरिनु पर्छ।
यो केटो खाना के हो?
आहारको आधार भनेको हाम्रो आहारमा कार्बोहाइड्रेट र कार्बोहाइड्रेटको सबै स्रोतहरू प्रतिबन्धित गर्नु हो, ताकि अन्य चयापचय मार्गहरू सक्रिय हुन्छन्। यस प्रकारको खानामा कार्बोहाइड्रेटको अनुपात दैनिक सिफारिश भन्दा कम हुनुपर्दछ, कुल क्यालोरीको or० वा %०%। सामान्य तरिकामा, लगभग १०% वा कम ऊर्जा हाइड्रेट्सको रूपमा प्रदान गरिएको छ।
त्यहाँ केटोजेनिक आहारहरूको धेरै प्रकार छन्, सबै समान रूपले प्रतिबन्धित छैनन्, त्यसकारण केही फलफूल र तरकारीहरूको सेवन गर्न अनुमति दिइन्छ, तर नियन्त्रणित मात्रामा, जबकि अन्यमा हाइड्रेटको सबै स्रोतहरू हटाइन्छ, पूर्णतया अनाज, फ्लोर, रोटी, पास्ता, फलफूल, चामल, फल निषेध र केही तरकारीहरू।
अन्य केटो डाइटहरूमा उपवास केटोोन निकायको प्रारम्भिक गठनको प्रचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसले पछि उच्च फ्याट अक्सिडेसनको खर्चमा तौल घटाउनेछ।
केटोोजेनिक डाईटमा खानाहरू अनुमति दिइन्छ
खानामा अनुमति प्राप्त खाद्य पदार्थहरू, श्रृंगार एक खाने योजना जुन धेरै बर्षहरूमा लोकप्रिय भएको छस्वास्थ्य लाभका लागि धन्यबाद।
यो तौल घटाउनका लागि प्रभावकारी छ र औषधीको समयप्रति संवेदनशील नभएका बिरामीहरूमा दौरा कम गर्न पनि कार्य गर्दछ। थप रूपमा, टाइप २ मधुमेहको उपचारसँग यसको सम्बन्ध हाल अनुसन्धान भइरहेको छ।
केटोजेनिक डाईटमा अनुमति दिइएका खाद्यहरूको सूची
अर्को, हामी तपाईंलाई भोकहरू के बारे मा भोलि सुरु गर्नको लागि तपाइँको खाने योजनामा ​​हुनुपर्दछ भनेर बताउँछौं केटो आहार।
जनावर मूल को खाना
प्रत्येक र जनावरको उत्पादनहरु लाई अनुमति छ, मासु, माछा र अण्डा, प्रोटीनयुक्त धनी खाद्य पदार्थ हो केटो डाईटको पहिलोको आधार बनाउनुहोस्।
मांसपेशिको क्याटाबोलिज्मबाट बच्न प्रोटीनको यो योगदानको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ, जसले मध्यम र लामो अवधिमा सारकोपेनियाको विकासलाई रोक्दछ। कुटपिटबाट जोगिनु पर्छ, किनकि यसले कार्बोहाइड्रेट ल्याउन सक्छ।
पशु उत्पत्ति को खाना अनुमति छ:
दुग्ध - उत्पादन।
तरकारीहरूले लगभग कुनै कार्बोहाइड्रेट प्रदान गर्दैन। यस कारणका लागि, तिनीहरूलाई केटोजेनिक आहारमा समावेश गर्न सकिन्छ, जब सम्म कन्द र तिनीहरूको मात्रामा एक अधिक टाढा छ।
अर्कोतर्फ, तपाईंले ठूलो मात्रामा फलफूल खानु हुँदैन फलबाट फ्रुक्टोजले केटोसिस प्रक्रिया बिच्छेद गर्दछ। यस किसिमको आहारका समर्थकहरू तर्क गर्छन् कि फ्रुक्टोजले कलेजो रोगको जोखिम बढाउन सक्छ, त्यसैले फलफूल प्रतिबन्ध गर्न आवश्यक छ किनभने तिनीहरूसँग पनि फलफूलहरू छन् जसले फ्याट एसिडको मेटाबोलिजममा हस्तक्षेप गर्दछ।
सिफारिश गरिएको तरकारीहरू:
अन्तमा, केटोजेनिक डाईटमा तपाईंले फ्याटयुक्त खाद्य पदार्थहरू पर्याप्त मात्रामा खानु पर्दछ। यसले ओमेगा and र ओमेगा provide प्रदान गर्दछ जुन शरीरको कार्यको लागि धेरै आवश्यक हुन्छ।
जब हामी बोसोयुक्त खाद्य पदार्थहरू भन्ने गर्छौं, हामी निम्न स्वस्थ खानाहरूको मतलब गर्दछौं:
तरकारी तेल, जस्तै अतिरिक्त कुंवारी ओलिभ तेल, वा नरिवल तेल।
यी उत्पादनहरू जहिले पनि कच्चा सेवन गर्नुपर्दछ ताकि उनीहरूको पौष्टिक मूल्यलाई हानी नपरोस। यदि हामीले लिपिडलाई उच्च तापमानमा राख्यौं भने यसले ट्रान्स-फ्याट्टी एसिडको उत्पादन बढाउँदछ।
केटोजेनिक आहारको साथ सम्भावित समस्याहरू
केटोजेनिक खानाले केही साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छजस्तै कहिलेकाँही कब्ज, हेलिटोसिस, मांसपेशी ऐंठन, टाउको दुखाइ, पखाला, पुराना, र कमजोरी।
यदि सबै भन्दा फलफूल र तरकारीहरू आहार बाट कम छन्यसले हामीलाई भिटामिन, खनिज र फाइबरहरूको आपूर्तिमा कमी हुन सक्छ। पूरकको साथ अतिरिक्त योगदानको साथ यो समाधान गर्न सकिन्छ।
सानो फाइबर लिएरa, हामीलाई कब्ज हुन सक्छ, त्यसैले यो जडिबुटी चिया लिन महत्वपूर्ण छ कि प्राकृतिक निकास को सुविधा, जस्तै mallow वा frangula आसव।
केटोन शरीरहरूको कारणले हामीमा सास फेर्न सक्छ तिनीहरू अस्थिर हुन्छन् र फोक्सोबाट बाहिर निस्कन्छन् जसले नराम्रो सास वा हल्लिटोसिसको परिणाम दिन्छ।
यो संज्ञानात्मक स्तर कम गर्न सक्छकिनकि मस्तिष्कले ग्लूकोज प्रतिस्थापन गर्न केटोन शरीर प्रयोग गर्नुपर्दछ, यसको छनौटको ईन्धन, संज्ञानात्मक प्रदर्शन बिगार्न सक्छ।
यो पछ्याउन गाह्रो छ यस प्रकारको खाना लामो अवधिमा पछ्याउन अलि जटिल छ किनकि धेरै खानाहरूमा कार्बोहाइड्रेटहरू जस्तै अन्नहरू, जई, फलफूल, तरकारीहरू, रोटी, पीठो, पास्ता, चामल, इत्यादि हुन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » निर्वाह भत्ता » केटोजेनिक खाना, केटो आहारको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै चीज
कारण किन तपाईको वजन कम छैन